Ilaah xukummo ma Dira | Apg29
Halkii, ayuu Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah si aan dhulka u soo diray!
In Ilaah xukunka u soo diri lahaa in Golaha waa faasiqnimo. Ciise wuxuu u yimid ma inuu xukumo dunida, laakiin u badbaadin.
Waa in aan fahmo mid wax aad u muhiim ah: In axdiga cusub, Ilaah ugu soo diraa xukummo lahayn, laakiin waxa uu Ciise, oo Wiilkiisa keliya oo dhashay diri doonaa dunida ugu soo galay!
John 3: 16-17. Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Waayo, Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin laga yaabaa in dunidu ku badbaaddo isaga.
Musiibooyinka iyo cudurada waa wax dhacaya dunida jilicsan iyo musuqmaasuq.
Notice waxa Ciise wuxuu ku yidhi ku saabsan musiibada in si weyn loo yaqaan oo ka dhacay Yeruusaalem:
Luke 13: 4-ta "Ama siddeed iyo munaaraddii Siloo'am ay dhacday oo ay dishay, ma waxay idinla tahay, inay ka gef ka xun oo dhan dadka kale ee ku nool Yeruusaalem?"
Halkan Ciise wuxuu ka hadlayaa oo aan xukunka wax kasta oo Ilaah on siddeed iyo ku dhintay shilka. Masiibooyinka dhici nolosheena.
dhimashada kadiska ah
War, dulmi iyo dhimashada lama filaan ah ayaa sidoo kale ka dhaca:
Luke 13:12. Laakiin waqti isku mid ah u yimid qaar ka mid ah wax uga sheegay dadka reer Galili oo Bilaatos dhiiggooda ku daray allabarigooda. Ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Ma waxaad u malaynaysaa in kuwii reer Galili ahaa ay ka xun Galili oo dhan kale sababta oo ah waxay tani u xanuunsaday?
Ciise ayaa sidoo kale ku hadla ee ku saabsan dagaalka, iyo abaar, safmar ah iyo dhulgariir,
Matayos 24: 6-7. Oo waxaad maqli doontaan dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood. Hubi in aadan heli cabsi, waayo, waxaas oo dhan waa inay dhacaan, laakiin dhammaadku weli weeye. Waayo, dadku waxay ku kici doontaa, boqortooyona boqortooyo, oo waxaa jiri doona abaaro iyo belaayo, iyo dhulgariir meelo badan.
Laakiin tani ma aha xukummadii Ilaah! Waxaa jira waxyaabo ka dhacay maanta nolosheena iyo dunida oo dhan.
Ciise xukummo ma Dira
Ciise xukummo ma Dira! Waxa uu yahay Badbaadiyaha ah kuwaas oo u yimid inuu naga badbaadiyo. Wuxuu maalintii Bentakostiga soo diray Ruuxa Quduuska ah, dadka oo dhan. - Aan iyaga ka mid ah!
Ruuxa Quduuska ah ayaa runtii yahay ma xukun ama xaakin. Isagu wuxuu inoo yahay Gargaare!
Maanta waa waqti badbaadada! Maanta, mid kastaa wuxuu heli Ciise Masiix iyo badbaadi - badbaadiyey! - Ma Dhibka!
Oo kanu waa dhan nimcada! aadna ku badbaaddeen rumaysadka ee Ciise nimco. Waa kuma xirna shuqullo iyaga u gaar ah, laakiin by nimcada.
muddo Nimcada maanta khuseeyaa!